Word, Excel ary PowerPoint dia mifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny trackpad amin'ny iPadOS | Vaovao IPhone
Hatramin'ny nanoloran'ny Apple tamin'ny fomba ofisialy ny Magic Keyboard tamin'ny trackpad, dia efa betsaka ny fampiharana izay tsikelikely nohavaozina mba hanolorana ny fanohanan'ny trackpad, tsy ho an'ny Magic Keyboard ihany, fa ho an'ireo kitendry rehetra mampiditra azy, mba hanolorana traikefa mitovy amin'ny zavatra hitantsika amin'ny Mac.
Iray amin'ireo rindranasa izay naharitra indrindra ny fanavaozana dia ireo izay ao anatin'ny Office. Miresaka momba ny rindranasa Word, Excel ary PowerPoint telo izahay izay miaraka amin'ny trackpad avelao izahay hahazo tsara indrindra amin'ny iPad Pro. Ny fanavaozana an'ireo rindranasa telo ireo izay misy ny fanohanan'ny trackpad dia efa hita ao amin'ny App Store.
Ao amin'ny antsipirian'ny fanavaozana izay navoakan'i Microsoft tao amin'ny bilaoginy, manazava amintsika ny fomba fiasa izy ireo, fiasa iray izay manome antsika traikefa tena nitovy tamin'ny zavatra efa hitanay tamin'ny rindranasa Apple office.
Rehefa mamindra ny rantsan-tànanao amin'ilay trackpad namboarina avy ao amin'ny Magic Keyboard ianao, dia lasa fitaovana ilainao arakaraka ny atiny atoro anao ny cursor.
Ary ny fampiasana totozy na trackpad miaraka amin'ny iPad ho an'ny asa iraisana toy ny fanasongadinana ny andalana ny lahatsoratra ao amin'ny Word, ny fisafidianana karazana sela ao amin'ny Excel, ary ny famindrana sy fanovana sary ny sary ao amin'ny PowerPoint dia tsotra sy intuitive toy ny taloha ihany.
Ity traikefa ity dia ho fantatry ny olona rehetra izay nampiasa ny Office tamin'ny Mac na PC ary manampy amin'ny fanovana ny iPad sy ny fahafahany manao asa bebe kokoa.
Ireo fanavaozana ireo dia taratry ny fanatsarana endrika farany izay nataon'i Microsoft ho an'ny fampiharana azy, izay mamela mankafiza Microsoft 365 toy ny amin'ny solosaina ihany.
Tokony hotsaroana izany Office 365 dia nomena anarana hoe Microsoft 365 latsaky ny herintaona lasa izay, na dia manome tombony sy fiasa toy ny tamin'ny anarana teo aloha aza izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Word, Excel, ary PowerPoint izao dia mifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny trackpad amin'ny iPadOS